Uyivula njani iMac ngewindows Watch | IPhone iindaba
Uyivula njani iMac ngewindows Watch
Iindaba ze-IPad | | iPad, iWatchO
Yenye yeenoveli ezinikezelwe ngu-Apple kwi-Keynote yokugqibela apho ibonise khona iinkqubo zayo ezintsha zokusebenza: i-iOS 10, ii-watchos 3, ii-MacOS Sierra kunye ne-tvOS 10. Ukukwazi ukuvula ikhompyuter yethu ye-Mac, nokuba yi-iMac, iMacBook okanye iMac mini, ukusebenzisa iApple Watch kunokwenzeka ngakwizicelo zomntu wesithathu, kodwa ukusuka kwi-MacOS Sierra kunye ne-watchOS 3 inokwenzeka ngokwendalo, ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na inkqubo. Ukucwangciswa kulula kakhulu kwaye ukusebenza ngakumbi. Sikubonisa indlela yokuvula iMac usebenzisa iApple Watch kule vidiyo ilandelayo.
1 Qwalasela uQinisekiso lweZinto ezimbini
2 Yenza kusebenze ukhetho kwiiNkqubo ezikhethwayo
Qwalasela uQinisekiso lweZinto ezimbini
Linyathelo lokuqala lokuba usebenzise lo msebenzi, ukuba akunjalo Kuya kuba nzima ukwenza ukhetho kuseto lweMac yakho. Sineenkcukacha ngenkqubo kweli nqaku kwaye kuya kukuthatha imizuzu emihlanu.
Yenza kusebenze ukhetho kwiiNkqubo ezikhethwayo
Ngokukodwa kwimenyu yoKhuseleko, kufuneka ujonge ukhetho "Vumela iApple Watch ukuba ivule iMac". Nje ukuba yenziwe, yonke into iyaqwalaselwa ukuba isebenze, ngaphandle kokuchukumisa nayiphi na into ekubukweni kwakho okanye kwikhompyuter yakho. Tshixa iMac yakho ukwenza uvavanyo kwaye uyivule, uya kubona ukuba ileyibhile ibonakala ngezantsi kwegama lakho elibonisa ukuba iMac iyavulwa kwaye emva kwesibini uza kuba kwidesktop yekhompyuter yakho ngaphandle kokuchukumisa nantoni na.
Ayisiyonto intsha yokwaphula umhlaba, ewe, nangakumbi xa bekukho izicelo ezenze ngokungaphezulu okanye kancinci ngokufanayo, kodwa kuyinyani ukuba Kulula kakhulu ukuphakamisa isiciko seMacBook yakho kwaye uqalise ngokuthe ngqo ukuyisebenzisa ngaphandle kokufaka iphasiwedi, kwaye ukuba omnye umntu uyayenza, bafumanisa ukuba kufuneka bachwetheze igama eligqithisiweyo okanye abayi kuba nakho ukufikelela. Inqaku elinye ngokuxhasa iMacOS Sierra kunye neWatchOS 3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Uyivula njani iMac ngewindows Watch
Ngaba lo msebenzi usebenza kuphela kwi-Macbook okanye kwi-iMac?
Unokhetho kwi-iMac kodwa ayizukuvula
Ndingena kwiiNkqubo ezikhethiweyo kwi-MacBook yam kodwa ukhetho lokuvula nge-Apple Watch aluveli ... kucacile ukuba sele ndinayo iMacBook ihlaziyiwe kwi-MacOS Sierra
Olu khetho alubonakali kum…. Naliphi na ingcebiso ngalo ???
ULuis Gomez sitsho
Ndinayo enye endiyifudukayo kwaye ndiyabona ukuba zineeveki ezi-4 ubudala kwaye abaphenduli ke kutheni besithi sishiya izimvo ukuba abayiphenduli imibuzo yethu ndiphindaphinda ukuba bangaphendula ndingavuya kakhulu
Phendula luis gomez
Umphathi weMedia Remote Pro simahla ixesha elincinci
I-malware entsha echaphazela ii-Macs ibizwa ngokuba yi-Eleanor